Ukukhishwa Okuphezulu Kwama-Frequency Induction Brazing Carbide kwezicelo zamathuluzi wezokwelapha
Ukukhishwa kweCarbide kucacile iukukhishwa kwebhande inqubo lapho kusetshenziswa khona ithiphu enzima entweni eyisisekelo ukukhiqiza umphetho wokusika onzima kakhulu.
Inhloso yalolu hlelo lokusebenza: Induction brazing carbide tipping of medical tools Bangathanda ukusebenzisa ukufakwa kwe-induction technology ukufaka amathoshi nokufeza inqubo ehlanzekile yokubopha.
I-DW-HF-15 imishini yokusebenza yokubopha ibekwe kuma-40% ukuphothula inqubo. Ukulawulwa kwesigaba sedijithali okuguquguqukayo kunikeza ukusebenza kahle ebangeni elibanzi lemvamisa.
Isipikili sensimbi esingenasinisi 6 13/16 "(17 cm) ubude esinendawo ebanzi engu-0.775" (1.96 cm) yokufudumeza kwakudingeka sifakwe ubhazabhaza wokufaka ama-carbide amabili 25/32 "(1.98 cm) ubude, 1/8" (7.8 mm) ububanzi, 3/32 ”(2.54 cm) ukujula. Kwakunokugqagqana okungu-9/16 ”(1.42 cm) ubude, 1/8” (25.4 mm) ububanzi (ohlangothini ngalunye lokusika ikhanda) no-1/16 ”(1.58 mm) ukujula.
I-Brazing flux yasetshenziswa endaweni ehlanganisiwe. Ukufakwa kwe-carbide kwabe sekufakwa phakathi kwama-pre-form. Umhlangano wavalwa ndawonye futhi wangeniswa kwi ukufakwa kwe-coil yokushisa. Ukushisa kusetshenziselwe imizuzwana engu-8 kufinyelela ezingeni lokushisa lika ~ 1400 ° F (760 ° C). Izingxenye zahlanganiswa ngempumelelo ndawonye.
Indzawo: Ezokwelapha & Amazinyo
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukugqolozela, ibhande le-carbide, Ukudonsa i-Carbide Carbide, ukukhishwa kwe-carbide okufaka ukungena, i-brazing carbide efaka isifudumezi sokungeniswa, Ukukhishwa kwe-Carbide, I-HF brazing carbide, I-HF brazing carbide itholakala, Ukukhishwa kwesibalo, ukufakwa kwesibhakabhakede se-carbide, Ukukhishwa kwe-Induction Brazing Carbide, amathuluzi wezokwelapha wokufaka induction, ukukhishwa kwe-brazing induction Imeyili kwemikhumbi